Vaovao - Inona no atao hoe base mould?
Andiana lasitra feno ho an'ny famokarana vokatra vovoka manokana amin'ny alàlan'ny fanindriana na famerenana amin'ny laoniny.
Ho fanampin'izany, ny fanohanana ny bobongolo dia antsoina koa hoe base mould. Ohatra, ny milina fanariana maty dia manambatra sy manamboatra ny faritra maro amin'ny bobongolo mifanaraka amin'ny fahamendrehana sy ny toerana voafaritra, ary ny ampahany azo apetaka amin'ny milina fanariana maty dia antsoina hoe base mould, ary ny mekanisma manosika, ny mekanisma mitarika, ary ny fisorohana mialoha Ny mekanisma famerenana dia misy pad pad sy takelaka misy seza.
Amin'izao fotoana izao, ny fampiharana ny bobongolo dia misy ny vokatra rehetra (toy ny fiara, aerospace, kojakoja ilaina isan'andro, fifandraisana elektrika, fitaovana fitsaboana, sns.). Raha mbola vokatra marobe io dia hampiharina ny famokarana bobongolo, ary ny lasitra bobongolo dia ampahany tsy azo sarahina amin'ny bobongolo. Amin'izao fotoana izao, ny fepetra takiana amin'ny toeran'ny bobongolo dia ho faritana arakaraka ny takian'ny vokatra arakaraka ny ambaratonga samihafa.
Ny lasitra bobongolo dia vokatra vita amin'ny lasitra vita tamin'ny lasitra, izay misy ampahany amin'ny takelaka vy isan-karazany, ary azo lazaina ho taolan'ilay bobongolo manontolo. Noho ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny fanodinana tafiditra amin'ny fitoeran-bobongolo sy bobongolo, ny mpanamboatra bobongolo dia hisafidy ny hanafatra ny bobongolo avy amin'ireo mpanamboatra bobongolo, manararaotra ny tombony amin'ny famokarana ataon'ny roa tonta hanatsarana ny kalitaon'ny famokarana sy ny fahombiazany.
Taorian'ny taona maro nivoarana dia matotra ny indostrian'ny famokarana formwork. Ankoatry ny toby famolavolana lasitra, ny mpamokatra bobongolo koa dia afaka misafidy ireo vokatra vita amin'ny bobongolo namboarina. Ny formwork mahazatra dia misy amin'ny fomba isan-karazany, ary ny fotoana anaterana azy dia fohy, vonona ny hampiasa aza, manome mpanamboatra lasitra maivana kokoa. Noho izany, mitombo ny lazan'ny formwork mahazatra.
Fohy, ny formwork dia manana fitaovana preforming, fitaovana fametrahana, ary fitaovana fanonganana. Namboarina matetika toy ny takelaka, tabilao (maodely anoloana), birao B (maodely aoriana), tabilao C (vy toradroa), takelaka ambany, tontonana misy thimble, takelaka ambany ambany, ary paositra fitarihana, paingotra miverina ary ireo kojakoja hafa.
Manaraka: Inona no atao hoe Runner System an'ny bobongolo tsindrona
Teo aloha: Inona avy ireo sokajy valo amin'ny lasitra tsindrona?